Lumbini KhabarNews Portal Of Lumbini | जेष्ठ नागरिक भत्ताले जोहो चलाउँदै : घरमै पाउँदा अझै खुसी - Lumbini Khabar
गुल्मी, १५ जेठ
मुठ्ठीभरी पैसा । हर्षले खुलेका ओठ । औलामा थुक लगाउँदै पैसा गन्न व्यस्त इस्मा गाउँपालिका २ की मनी दमाई । गाउँमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझेपछि निकै खुसी थिइन् । मैले सोधे बजै थोरै दिएर ? उनी बोलिनन्, तर तीन पटक गनिन् । पैसा गनेर सकेपछि फेरि सोधेँ यो पैसा के गर्ने बजै ? मनीले जवाफ फर्काइन, औषधी उपचार र खानै ठिक्क हुन्छ बाबु । कमाएर दिने कोहि नभएकाले बुढेशकालमा बृद्धाभत्तानै आफ्नो शाहारा भएको उनले बताइन् । माजिक सुरक्षा भत्ताले कैयन बृद्ध–बृद्धाको जिविकोपार्जन र सामान्य औषधी उपचारमा सहजता प्रदान गरेको छ । कमाई नहुनेले घर खर्च धानेका छन् । कमाई हुनेले पनि आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्न सामाजिक सुरक्षा भत्ता खर्च गर्छन् । अहिले लकडाउन थपिदै गएकाले कति बिपन्न परिवार समस्यामा परेका छन् । न खाने अन्न नत खर्च गर्ने पैसा । यो अवस्थामा जेष्ठ, जेष्ठ दलिल, विद्युवा र अपाङ भएका परिवारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताले निकै गुन लगाएको छ । कुमारी कुवर ११ बर्षदेखि एकल छन् । श्रीमान खडग बहादुर सुन्निने बिमारले बिते । तीन भाई छोरासहितकोे परिवार । खानपान र पढाई खर्चले गर्दा कुमारीले कैयन चुनौति खेपिन् । तर एकल महिला भएकै कारण सरकाले प्रदान गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ताले ठुलो हिम्मत पलाएको छ । ‘कमाउने घरमुली नभएकै बर्षौ भए, मजदुरी नगरे के खाने,’उनले भनिन,‘चार महिनामा आएको आठ हजारले पनि कति ठुलो काम गर्छ ।’ ७० बर्षीय बोमी रेश्मीले पहिलो पटक भत्ता बुझिन् । श्रीमान हुम बहादुरले भत्ता बुझन थालेका दुई बर्ष भए । अहिले भत्ता बुझन दुवै जनासंगै गए । श्रीमान–श्रीमतीले चार महिनाको १२÷१२ हजारका दरले २४ हजार बुझे । बोम बहादुरले भर्खरै अलसरको अप्रेशन गरेका छन् । उनको औषधीमै थुप्रै पैसा आवश्यक पर्छ । त्यो माथी घर खर्च पनि आफैले गर्नु परेकाले बच्ने कुरै थिएन् । अहिलेबाट श्रीमतीले पनि भत्ता बुझेकाले केहि राहत भएको रेश्मीले बताए । ‘छोरा–छोरीले कमाए आफै रमाए बुढा–बुढीको व्यथा कसलाई के थाहा,’उनले भने,‘भत्ताले क्रृण खोज्न परेको छैन् ।’
हस्तिचौरकै ७२ बर्षीय ठान बहादुर सार्कीलाई सामान्य खर्चको लागि कसैको आश गर्नु पर्दैन् । चार महिनामा १२ हजार आउँछ । भत्ताले मासु, घिउ र अन्य खान मन लागेको आफै किन्ने र कहिलेकाँही सामान्य बिरामी परे क्रृण खोज्न वा छोरा–छोरीसंग माग्न नपर्ने उनले बताए । स्थानीय तहसंगै जनप्रतिनिधी घरमै आएर भत्ता वितरण गर्ने गरेका छन् । ‘सुरुमा रातडाँडाबाट भत्ता बुझथ्यौ,’उनले भने,‘अहिले घर–घरमै आएर दिन थालेकाले धेरै सजिलो भएको छ ।’
सोहि स्थानका गिर बहादुर र लालमति परिवार पनि घर नजिकैबाट भत्ता बुझ्न पाएपछि खुसी छन् । भत्तासहित गाउँमा अरु काम पनि गर्ने भएकाले घर खर्चसंगै सानो–सानो क्रृण पनि बुझाउन थालिएको गिर बहादुर परियारले बताए । उनले खाद्यन्न र औषधी पसलमै थुप्रै तिर्न पर्ने भएकाले एक जनाको भत्ता त्यतै ठिक्क हुने बताए । इस्मा गाउँपालिकाले दोस्रो चौमासिकको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुई चरणमा वितरण गरेका इस्मा गाउँपालिकाल सामाजिक सुरक्षा वितरण समितिको संयोजक बिमला खत्रीले जानकारी दिइन् । कोरोना संक्रमणकै बिचमा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताले जिविकोपार्जन गरेका विपन्नको अवस्थालाई मध्ये नजर गरेर सामाजिक दुरीलाई समेत ख्याल गरेर भत्ता वितरण गरिएको खत्रीले बताइन् । ‘सामाजिक सुरक्षा भत्तासंग मानिसका कैयन संवेदना जोडिएका छन्,’उनले भनिन,‘गाउँमै गएर वितरण गर्दा धेरै खुसी छन् ।’
सरकारले जेष्ठ नागरिको लागि मासिक तीन हजार, दलित जेष्ठको लागि दुई हजार, एकल तथा बिधवाको लागि दुई हजार, दलित बालबालिकाको लागि चार सय, पुर्ण अपांगको लागि तीन हजार र अति अपांगको लागि १६ सयको व्यावस्था गरेको इस्मा गाउँपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत बाबुलाल थापाले जानकारी दिए । उनले गाउँपालिकाका ६ वटै वडामा गरेर १२ सय २७ जेष्ठ नागरिक, चार सय २९ जेष्ठ दलित, ६ सय २७ बिद्युवा एकल, ४८ पूर्ण अपांग, एक सय १७ आंशिक अपांग र तीन सय ८४ जना दलित बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिएको जानकारी दिए ।
TAG :जेष्ठ नागरिक भत्ताले जोहो चलाउँदै
← भारतबाट दैनिक दोव्वर आउँदै गुल्मेली : भारतमा भोक गाउँ रोगको डर
दर्लामचौरमा खानेपानीले ल्याएको खुसी : स्थानीय भन्छन् , जुग फेरियो →